Malunga Nathi - Ningbo Shenhe Ukunikela Co., Ltd
Ningbo SHENHE Ukunikela CO., LTD, owasekwa ngo-1995, ise-Ningbo City, nto leyo kwiindonga ezisemzantsi Hangzhou Bay Sea-ukuwela Bridge. SHB i umenzi ngobuchule omncinane kunye amancinci ngqo olunzulu groove ibhola ukuzala, ibhola self-esalo azale,-point ezine umfowunelwa ibhola sithwele kunye ophethe ibhola non-esezantsi.
Emva kokuba uphuhliso oluzinzileyo engama-23, SHB ophethe indawo yemboni 40000 yezikwere super lokusila umgca imveliso kunye umgca wemveliso indibano oluzenzekelayo, kwakunye nezinye processing kunye nokuvavanywa kwezixhobo phambili leeyunithi ngaphezulu kwama-200, nto leyo constitude somlinganiselo epheleleyo, uhlalutyo kunye nenkqubo yovavanyo. Umthamo yemveliso uyakwazi kwimveliso 50 ezigidi Iiseti iibheringi ibhola encinane amancinci. iimveliso zethu linokusetyenziswa ngemoto, injini ngesithuthuthu, izixhobo zombane eliphezulu-grade isixhobo sombane. Ukongeza, imveliso lwemoto obuvelisa ixhamla indawo ekhethekileyo, umntu ngokukodwa-liyinikiweyo yaye umgca wemveliso. Le mveliso has a ezinzileyo kunye oluthembekileyo elide ubomi, ngesantya esiphezulu, kunye nomthwalo phezulu, ngokuphumelela intembeko abathengi. Shenhe Ukunikela iquka kurhwebo lwasekhaya lwaza kwimarike yase USA, iYurophu, Japan, Taiwan, mpuma Asia kunye namanye amazwe kunye nemimandla.
Le nkampani luyasekwa kwaye luyaqaliswa isakhiwo ulawulo lwangoku, ngokufanayo le nkqubo efunekayo yolawulo, i-5 kwinkqubo yolawulo intsimi, nenkcubeko Kanban, ukulawula ukuveliswa lokuzala izithuthi kunye ISO / TS 16949: 2009 inkqubo yolawulo lomgangatho, kwaye ukuthwala non-Automotive nge ISO9001: inkqubo yolawulo lomgangatho 2008